About Us - I-Changzhou Hechang Machchan Co, Ltd.
I-Changzhou hechang yemishini co., L. Isungulwe ngo-2005, ingumkhiqizi ochwepheshe osuselwa ekuthengisweni okusha kanye nasenkampanini ye-service.etshe ekwenziweni kwemishini yokuxhumana nge-wire kanye nekhebula, imishini yokulungisa i-wiring. Njengenkampani enobuchwepheshe, inenamba enkulu yabasebenzi abaqeqeshiwe nabasebenza kwezobuchwepheshe, izinsiza eziqinile zangemva kokuthengisa kanye nobuchwepheshe bokuqala bokuqonda imishini, imikhiqizo basebenzise kakhulu embonini ye-elekhtronikhi, imboni yezimoto, imboni yamakhabethe, imboni yamandla nomkhakha wezindiza.
I-Changzhou hechang yemishini co., I-lores ingenisa izingxenye zemishini kusuka e-taiwan nase-Japan, futhi ihlanganiswe nobuchwepheshe obuthuthukile obuvela europe nase nkampani ebumbeneyo ye-states.our ikunikeza ngemikhiqizo nezinsizakalo zekhwalithi enhle, ukusebenza kahle kakhulu, ubuqotho nokuthembeka ukwenza ube nokuhamba okujwayelekile ukuthuthukiswa!
Imikhiqizo yethu eyinhloko kufaka phakathi umshini we-coaxial cable, umshini wokugunda ozenzakalelayo kanye nowokuhluza imishini, uchungechunge olukhokha imali, umshini wokusika i-tube, umshini wokuphamba we-crane, umshini wokuphonsa umshini, umshini wokuxhuma umshini ukudonsa okukhethekile kwensimbi yokusebenzisa izinsimbi zikagesi.
Ozakwethu Abambisene nabo
ngentengo enhle kakhulu kanye nensiza ezinikele kakhulu nemizamo engakhathali yokwenza amakhasimende ukuba athuthukise umkhiqizo futhi ahlangabezane nezidingo zamakhasimende.
ngezintshisekelo zamakhasimende futhi ulwele ukusungula, ukudala imikhiqizo emihle kakhulu emhlabeni.
ukwethembeka, isenti kwamakhasimende, okugxilwe emakethe, okusekelwe kubuchwepheshe, ikhwalithi yekhwalithi.
Service hotline amahora angama-24.wamukelekile ngokushayela ucingo.